Fampiofanana Malisiana Belzika | Tontolo alika
Alika Belzika Malisiana no karazany ankafizina rehefa tonga «tena alika«, Matetika isika no mahita azy ireo ao anaty vondrona mpamonjy voina, miaraka amin'ny polisy, mpamono afo ary izany dia noho ny ny fahaizany lehibe toy ny fanaraha-maso, fiarovana ary fanaraha-maso.
Ireto alika ireto tena manan-tsaina izy ireo ary amin'ny fiofanana sahaza azy ireo dia mety ho tonga saika olombelona izy ireo, mila miteny ihany izy ireo, saingy hainy ny maneho ny heviny sy mampazava ny tenany amin'ny fomba hafa.
1 Teknika fanofanana ho an'ny alika mpiandry ondry belza Malisiana
2 Alika be fitiavana tokoa ny mpiandry ondry belza
Teknika fanofanana ho an'ny alika mpiandry ondry belza Malisiana
maro teknika fanofanana alika Namboarina izy ireo mba hahatsapan'ny tompony fahasambarana, koa amin'ny lahatsoratra anio dia hanolotra teknika izahay, mba hahafahan'ny alika sy ny tompony faly.
Ny Malinois ary hahatsapa mifanaraka amin'ny tompony, dia hankasitraka ny zava-misy amin'ny fanatanterahana teknika fanenjehana ary valio izany. Raha toa ka misy antony manosika ara-dalàna io faniriana voajanahary io dia ho azon'ny tompony antoka fa hahomby amin'ny fampiofanana ity karazana alika ity.
ankapobeny, mila miofana sy mihazakazaka ny Malinois, ka raha olona mipetrapetraka ianao ary tsy tianao ny mazoto hatrany, dia mamporisika anao izahay hisafidy karazana iray hafa milamina kokoa, fa raha manana alika amin'ity karazany ity ny anao, mifototra amin'ny fiofanana tsara ny zava-drehetra ary ny fampihetseham-batana ataonao amin'izany, io no lakile.
Tsarovy fa ny ankamaroan'ny alika dia zavaboary ara-tsosialy, koa raha mila miala ao an-trano mandritra ny adiny fito mahery ianao dia hahatsapa fanahiana, ho sosotra ary ho sosotra mihitsy aza ny alikanao. Toy izany koa no mitranga raha avelanao any ivelan'ny trano sy lavitra ny fiasan'ny fianakaviana izany.
Alika be fitiavana tokoa ny mpiandry ondry belza
Isaky ny manao zavatra amin'ny zanak'alikao ianao, toy ny mijery tele, milalao lalao, na miresaka aminy aza, tadidio fa ny feon'ny feonao dia manombatombina hatrany, fitenin'ny vatana, ny fomba hanatonana ny olona ary na ny endrikao.
Ny alika dia be pitsiny kokoa noho ny eritreretintsika ary miaraka amin'ireo zavatra rehetra ireo ny alika dia mamorona mombamomba ny tompony, izay mety tsy mety na avy any, izy manapaha hevitra ny karazana fifandraisana tian'izy ireo miaraka aminao, ny toetra maha-izy azy izay mifototra amin'ny fifanajana.
foana mampiasa fomba tsara miaraka aminy, satria io no fomba tsara indrindra hampiofanana ny alikanao ary tsarovy fa ny sazy dia miteraka fihenjanana sy tsy fahazoana aina fotsiny amin'ny biby.
Ora dimy baiko fototra Ny azonao ampianarina ny Malondrinao 8 herinandro dia ny mianatra mipetraka, mandry, mandeha eo anilanao ary mihaino ny antsonao, ilaina tokoa ireo baiko ireo ho fiarovana azy ireo.
Hay fomba fanao mahazatra sy manan-danja izay azonao ampianarina ny mpiandry ondrinao Malinois hatramin'ny mbola kely, satria marani-tsaina tokoa izy ireo ka tsy ho ela dia ho fantany:
Ny fotoana fisakafoanana, torimaso ary filalaovana.
Aiza ny sakafo.
Ny toerana mety hanamaivanana ny tenanao.
Aiza ny kilalaonao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Manofana mpiandry ondry any Belzika
Karazana kely: Bolognese Bichon